soo dejinta baradhada - majaladda "Nidaamka Baradhada"
Bogga guriga Calaamadda baradhada soo dejinta
Calaamadda: baradhada soo dejinta
Uzbekistan ayaa ka gaabisay canshuurta qiimaha la socota (VAT) marka la soo dhoofiyo baradhada
Uzbekistan, laga bilaabo Oktoobar 14 ilaa Oktoobar 21, baradhada ayaa kor u kacay 43%. Si loo xakameeyo kor u kaca qiimaha cuntada, isla ...
Ruushka ayaa baradhada ka soo dhoofiya Iran, Moldova iyo Kyrgyzstan
Sida laga soo xigtay falanqeeyayaasha EastFruit, waxay diiwaangeliyaan sicirrada sare ee baradhada la iibin karo ee Ruushka iyo cabsida laga qabo yaraanta xilli -ciyaareedka 2021/22 ...
Sahayda baradhada Yukreeniyaan ee Belarus ayaa sii koraysa
Sannadkan Belarus markii ugu horreysay si baaxad leh uga soo degta baradhada baahida suuqa gudaha inta lagu guda jiro goosashada. Alaab badan ...
Qiimaha jumlada baradhada Uzbekistan ayaa kordhay 17%
Baradhadu waxay bilaabeen inay sare u kacaan qiimaha Uzbekistan. Labadii toddobaad ee la soo dhaafay, celceliska qiimaha jumlada alaabada ayaa kordhay 17%, in kasta oo ka hor ...
Belarus waxay ka soo dhoofisaa baradhada dalal kale
Badhtamihii dayrta, bakhaarrada dalka ayaa ka muuqday baradho la soo waariday. Sababta ugu weyn ayaa ah la'aanta alaab tayo leh, beeraha baradhada ee tan ...